Aadaa Karrayyuu: Maddoo, dhahannaa rifeensa intala dubraa fi oduu gara garaa – Kichuu
HomeNewsAfricaAadaa Karrayyuu: Maddoo, dhahannaa rifeensa intala dubraa fi oduu gara garaa
Dhahannaa rifeensa dubartoota Karrayyuu keessaa kam beektu? Akkuma jarreen dhiiraa rifeensa tolchatan dubartoonnillee gosa adda addaan of bareechu.
‘‘Dabbasaan gaanfa dhiiraati” Karrayyuu
Isaan keessaa maddoon tokko. Intala dubraa Karrayyuu maddoodhaan beekan.
Karrayyuu: ‘Nuti Gunfura keenya hedduu itti boonna’
”Aadaa Gunfuraa kana nuti irruma dhufne, nutillee mangudduma jalatti barre. Ammammoo namni hedduun dhiisaa jira,” jedhan obbo Jiloo Fantaallee, namni dargaggootaaf gunfuraa hojjetan.
Obbo Jiloo Fantaallee aanaa Fantaallee Ganda Haroo Qarsaa jiraatu.
Inni dargaggoota Karrayyuutiif rifeensa warra dhiiraa kan Gunfura jedhamee waamamuu bareecha. Karrayyuun rifeensa Gunfuraa kanaan ittiin beekamu.
Akkaataa itti tolfannaa isaaniitis rifeensa dheereffatan filaa qopheeffatanii ittiin filaa bareechatu.
Filaan warri Karrayyuu ittiin gunfura bareechatan kunis muka agamsaa, gaanfa loonii fi gaanfa saalaa irraa tolfama.
Karrayyuun ‘ Dabbasaan Gaanfa dhiiraati’ jedhu. Yeroo hundumaa aadaa Gunfuraa kanaan of faayanii adeemu jedha obbo Jiloon.
Yeroo roobni tolee aannan baayinaan argame dhadhaa sirritti waan dibataniif Gunfura midhassachuuf hedduu mijata. Yoo bonni hammaatee dhadhaan dibatan dhabamummoo bishaanumaan dhiqatanii gadi jissanii ittiin deemu.
Gadaa Hawaas Abbaa Gadaa Karrayyuu tahuun baallii fudhata
Gunfura filachuun ogeessaan malee hin taatu jedhu warri Karrayyuu.
Jalqaba rifeensi yoo dheeratu karuma hundaanuu waan biqiluuf ogeessatu karaa fuulduraa fi duubaa bocee bifa itti tolcha.
Yoo kan dheerate tehes ogeessumatu hamma gunfuratti bareedutti irraa gabaabsafi. Fuulduraanis kaarruu itti bananii akka ija hawwatutti bocasaa bareechu.
Karrayyuutti aadaa Gufuruu filachuu
Gunfura midhassachuuf rifeensi hanga waggaa lamaatti dheerefachuun barbaachisuu mala.
Rifeensa kana dhadhaa dibanii boonsanii bareechuudhaaf daqiiqaa 30 hanga saatii tokkoo ogeessa jala taahanii hojjetachuu nama gaafata. Dhiironni Karrayyuu Gunfura isaanii yeruma hunda filatanii deemuun aadaadha.
Taatullee guyyaa sirna qaban, keessumaa yeroo fuudhaa fi heerumaa haalumaan bareechachuun baratamaadha.
‘Wanti ummata kaanirraa adda nugodhu Gunfura keenya kana.
Warri biraa nu’ii goofaree akkanatti filatee deemu yoo nu argan Karrayyuma jedhu. Gartokkoon ittiin beekamtii keenya.’ jedhu Obbo Jiloon.
Gunfura filatanii akkuma arganittilllee hin rafani. Gunfurri ogeessi itti dhamahee bareeche kuni yeroo hirriibaa akka hin diigamneefis malaan rafama.
Meeshaa akka boraatii kan morma jala kaahatnii rafantu jira. Yeroo isa mormatti ofutubanii rafan Gunfurri lafa hin tuqu.
Kanaafuu yoo hirriiba keessa cinaacha jijjiirachuu barbaadanillee boraatii kana gara itti ciisuu barbaadanitti dabarfachaa rafu.
Gunfurri takkaa tolfamee raawwannaan harkaan hin tuqamu, yoo hooqsisellee filaa qara tokkoo Kanaan malaan hooqqatu.
Namni hundis amala Gunfuraa kana waan beekuuf taphaafillee harkaan jalaa hin tuqani namuu ni beeka waan ta’eef.
Karrayyuun garri caalu rifeensa Gunfuraa kana tolchuu waan beekuuf walii waliif bareechu.
Nama Gunfura qabu dubartoonnillee nijalaatu, haasaa isaallee kabajanii dhageefatuufi.
Nama Gunfura hin qabnemmoo hagas mara haasaa isaallee hin kabajjuuf ‘ jedha dargaggeessi Karrayyuu.
Kana malees ‘yeroo gara magaalaa deemnu namoonni naannoo biraarraa dhufan aadaa rifeensa tolfannaa karrayyuu kana waan jaalataniif yeroo hunda suura nuwaliin ka’aa oolu. Namni naannoo biraarraa dhufe nijaalata. Akkamitti akkanatti bareechattu jedhanii dinqisiifatu’ jedha.
Dargaggoo Hawaas Waaqayyoo, Karrayyuutti namoota Gunfura bareechuun beekaman keessaa tokko. ‘xiqqeenyumarraan gunfura hojjechuu bare.
Yeroo birraafaa guyyaatti hanga namoota afuriitii nan filaa jedha.
Yeroo bonaa namni guddoollee walbira waan hin turreef namuma tokko lamaafin hojjedha jedha.
‘Gunfura tolcheefii namni gara manasaa gale yoo bakki namni yaada itti kennee, hin bareedin jiraate ganama nabira dhufee natti hima, anis bakkicha sirreesseefiin gammachiisa.’ Jedha dargaggoo Hawaas.
Uummanni Karrayyuu rifeensa isaanii kanaan hedduu beekamu.